← काठमाडौंको फोहोरको थुप्रो म र सभ्य मेरो परिवार	Climate Change: The Answer is, “Yes” →	यो गाइजात्राको जेठ १४ मा नै दाहसन्स्कार हुनु पर्छ	May 28
आज जेठ १४, नेपालको संबिधान जारी हुनु पर्ने दिन, तर त्यो हुन सकेन र अब के होला भन्ने अन्योलताको कालो बादल झन गहिरिएर गएको छ। मलाई २ महिना अगाडि पनि विश्वाश थियो नेपालमा संबिधान बन्छ र शान्ती हुन्छ भन्ने तेसैले मैले उक्त पंक्ती हरु आफ्नो डायरीको रुपमा लेखेको थिएँ। तर आज अन्तत: मेरो विश्वाशमा तुसारापात भएको छ। अब मलाई मेरा देशका नेताहरुमा विश्वाश छैन। मेरो बिचारमा संबिधान नबन्नुमा कुनै एउटा बेक्ती भन्दा पनि “बाद” दोसी रहेको छ। सेना समायोजन र अन्य कुरालाई सतही रुपमा देखाइए पनि राज्यको निर्देसक सिदान्त कस्तो किसिमको हुने भन्ने कुरा नै दलहरु बिच मिल्न नसक्दा आज संबिधान सभा तुहिएर गयो। लोकतत्न्त्रका नाममा नेपाली कङ्रेस हिजो ४७ साल पछीकै असफल भारतिय मोडलको राज्य बेबस्था स्थापित गराउन मरिहत्ते गरी लागि पारीरहेको छ। समग्रमा उसले सैदान्तिक रुपमा ko नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई स्विकार्न सकेन। माओवादीले बलिदान र क्रान्तिका नाममा भुमन्डलीकरणले नेपाली समाजमा पारेको प्रभाब र १२ बर्ष जनयुद्ध लडदै गर्दा नेपालको तेस्रो पुस्ताको सोचाइमा आएको परिवर्तनलाई ठम्याउन सकेन। उ अझै पनि बन्दुककै भरमा राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ। अर्को भाले-पोथी पार्टी छ एमाले, उसले ४६ साल पछीनै कहिले पनि नेत्रित्व लिन सकेन, उसको काम भनेकै साँछीको भूमिका निबाउनु हो। त्यो जिम्मेवेरए उसले राम्रै बहन गरिरहेको छ र सो बापत पुरस्कार्को रुपमा सत्ता पाएको छ। यो पार्टीमा बिचार र कुसल नेत्रित्वोको खडेरी नै छ। यिनै कमजोरिले गर्दा संबिधान बन्न सकेन र अहिले सम्मको स्थिती हेर्दा अब संबिधानसभा लाई आर्यघाटमा लगेर सेलाउने तयारी गरे जस्तो देखिदै छ। तेही पनि हेरोउ घाटे बैध हरुले प्राण केहीसमयको लागि भरी दिछन कि?? अब पनि यो संबिधानसभाको म्याद यही साइजमा थपेर अगाडि बढ्नु भनेको नेपाली जनताको मतको अपमान हो। म चाहन्न मैले २ बर्षको लागि चुनेको बेक्ती ४ बर्ष सभासद होस। र राज्यको सम्पत्तीबाट तलब भत्ता खाओस। म चाह्न्न सहमतिका नाममा समग्र न्याय प्रणालिको र बेबस्थाको उपहास होस्। तेसैले मैले भन्न पर्छ, मलाई यो भुतले खाने समयमा गरेको सहमती स्विकार्य छैन। के हामी नेपाली जनता भेडा बाख्रा होउँ, यि तथाकथित नेता हरुले जे गर्‍यो त्यो मान्ने। के हामीलाई मात्र लाग्छ कानुन, यिनी हरुलाई लाग्दइन। एउटा बिद्ययक संसदमा पेस गरेर छलफल गराउने र पास गर्ने निस्चित संबैधानिक प्रकृया छ। यसको लागि निस्चित समय लाग्दछ। तर यदी सहमती भै हाल्यो भने राती १० बजे बिधेयक पेस गरेर १२ बजे पास गराउने हुन यि नेता हरुले। के यस्तो प्रकृया नपुगेको बिधेयकको कानुनी हैसियत हुन्छ?
तेसैले अब नयाँ सोचबाट अगाडि बढ्नको लागि यो गाइजात्राको जेठ १४ गते बिगठन हुनुपर्छ र सानो आकारको समाबेसी प्रकारको आयोग बनाइ( भत्ता नखाने गरी), यो संबिधान सभाले निस्कर्समा पुर्याउन नसकेका कुरालाई जनताको समेत राय लिदै specialist हरुको सहयोगमा संबिधान बनाउनुमा नै देशको कल्याण हुन्छ। संबिधान बनाउन संबिधान सभानै चाहिन्छ भनेर सोच्नु भ्रम हो। नेपालको संबिधान सभाले अन्तरिम संबिधानलाई हजारोउ पटक लात मारेको छ। पोहोर साल माओवादीले यसलाई तुरुपको रुपमा माधव कु नेपालको बिरुद्ध प्रयोग गर्‍यो, यसपाल कङ्रेसले तुरुपकै रुपमा माओवादी बिरुद्ध प्रयोग गर्दै छ। तेसैले हामीले यसलाई आजकै मितिमा दाहसंस्कार गर्नु पर्छ ता कि अर्को पटक यो नेपाली जनताको अग्रगमनको चाहनाको बिरुद्धमा तुरुपको रुपमा प्रयोग नहोस्।
Keeps Working !!	View all posts by mkshblog »	Posted on May 28, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← काठमाडौंको फोहोरको थुप्रो म र सभ्य मेरो परिवार	Climate Change: The Answer is, “Yes” →	Leaveacomment